USA တွင်အကောင်းဆုံးစျေးပေါတဲ့ E ကိုဖျော်ရည်1 (209) 565-3873	တစ် vendor ဖြစ်လာ
အခမဲ့ E ကိုဖျော်ရည်ရယူနိုင်သော
သင်ကဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါမှာ Quit မူမည်?	How long have you been smoking
ထက်နည်းသော5အနှစ်	Sinceayoung'n	Just started	10+ အနှစ်	Correct!
Never tried and don't really want to	A couple times	Haven't tried but I'm thinking about it	I lost track of all the times	Correct!
ဟုတ်ကဲ့, toafew friends	အဘယ်သူမျှမ, I'd never do that	I tell everyone I associate with	အဘယ်သူမျှမ, I don't see the point	Correct!
I never have time	The addiction	Just being lazy	Friends/family who smoke	Correct!
ဟုတ်ကဲ့, I currently vape	အဘယ်သူမျှမ, it seems too complicated to me	အဘယ်သူမျှမ, but I'd like to give itatry	I tried it but that's about it	Correct!
Didn't work so I stopped	Helped me cut back on cigarettes	Now I smoke AND vape, thanks!	Just said I haven't tried it	Correct!
ဟုတ်ကဲ့, I'm actively trying to quit	NO! I don't want to stop!	I keep forgetting	ဟုတ်ကဲ့, until I get stressed	Correct!
I'd want one inafew years	I'd hide inside my house	I'd want one immediately	I'd never want one	Correct!
Vape with him	Beat him up and run away	Haveadrink with him	Smokeacigarette with him	Correct!
Share your results	Facebook က
Related ပို့စ်များစက်တင်ဘာလ 26, 2015စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း: သငျသညျအဘယျသို့ Vaper ၏ Type နေရာမှာဖြစ်ကြသည်?ပိုပြီးဖတ်ပါသြဂုတ်လတွင် 31, 2015စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း: မဟုတ်သော E ကိုဖျော်ရည်အရသာပါဝင်ပစ္စည်းများပိုပြီးဖတ်ပါ	တစ်စာပြန်ရန် Leave ပြန်ကြားချက် Cancel	သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်. တောင်းဆိုနေတဲ့လယ်ယာမှတ်သားနေကြသည် *မှတ်ချက် နာမကိုအမှီ * အီးမေးလ်က * website က သတင်းလွှာသည်ငါ့ကို sign up ပြုလုပ်!
စတော်ဘယ်ရီငှက်ပျော E ကိုဖျော်ရည်
အထဲက: $14.99 - 30 ml နှုန်းဆင့်	4.95 များထဲက 5	(21 customer reviews)
3-အရသာအသီး & အချိုပွဲ E ကိုဖျော်ရည်နမူနာ Kit ကို (3 15ml ပုလင်း)
$24.99	5 များထဲက 5	(14 customer reviews)
Popular posts	25 အဆိုပါမဟုတ်သောအကောက်ခွန် Vape Mods ၏
tank နဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးပါ E-အရည် Blending Choose လုပ်နည်း
ဒါက Vape နာမည်ကြီးတွေ၏တက်ကြွစွာနောက်ဆုံးရေးသားချိန်စာရင်း (50+ and Counting…)
"Vaper ရဲ့လျှာ": အဲဒါဘာလဲ? & How to Get Rid Of It?
ဘာသာစကားအားဖြင့် စတိုင် Vape
အကောင်းဆုံးစျေးပေါကeဖျော်ရည်
ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု	သဘောင်္တင်ခ & Returns
ကို Safe စျေးဝယ်အာမခံ
© 2015 UNO အရည် LLC. အကောင်းဆုံးစျေးပေါတဲ့ E ကိုဖျော်ရည်. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်. ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ ကျွန်တော်တို့ဆီက purchasing by, သငျသညျလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏နှစ်အောက်ဘယ်သူ့ကိုမှအဘို့မသင့်တော်ပါသဘောတူ 18.